3.1 I-produktidé nr 1: E-böcker / Amabhuku
3.2 I-produktidé # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
3.3 I-produktidé # 3: Coaching / Consulting
Okuthunyelwe okuxhasiwe kukuhle ukufunda ukuthi ungasebenza kanjani futhi ubonise umkhiqizo, kodwa amakhasimende abhekeke angafuni ukubona okuningi kulawa kubhulogi yakho (i-20% exhasiwe ku-80% engaxhasiwe ibhekwa "Kuhle"), futhi ayifuni ukubona izethulo zokuncintisana. Okuthunyelwe okuxhasiwe kungase kungabuyiseli ukubuyisa okukhulu ngesikhathi sakho sokutshalwa kwezimali. Uma iklayenti ikukhokhela i- $ 100, futhi uchitha amahora amahlanu usebenza kulowo msebenzi, kusukela ekuthengeni komkhiqizo kuya kokuthunyelwe okuhlelekile, uyenzela u- $ 20 ngehora. Umzamo kungenzeka ukuthi awufanele ukukhokha.
Umkhiqizo wakho ungaba isikhathi eside noma esifushane njengoba udinga, ungaba nemininingwane förbättrar kakhulu, ingahle ibuyekezwe njengoba ubona kufanelekile, noma ungadala izinguqulo ezintsha ngokusekelwe ekubukeni kwezilaleli. Futhi kuye ngokuthi uhambisa kanjani umkhiqizo wakho, uzoba nokulawula amanani futhi ugcine iningi noma yonke inzuzo.
Ubuchwepheshe bakho bungakuseta kahle kakhulu ukuze uthengise izinhlobo ezithile zezinto. Uzodinga ukugxila endaweni lapho unesipiliyoni khona futhi wakhe umkhiqizo ozungeze amakhono akho ne-nisch: ukuba ngumzali, ukupheka, ukwenza isikole, njll.
I-produktidé nr 1: E-böcker / Amabhuku
I-produktidé # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
I-produktidé # 3: Coaching / Consulting
Ababhulogi abaningi bafunda banothando lokuchofoza ikhodi noma ukuklama ihluzo. Unganikeza amaphakheji afana ne-WordPress teman, isethi yezithonjana noma ukugcinwa kwebhulogi. Uma unama-savvy, ungacabangela amasayithi wokwakha kusukela ekuqaleni noma umklamo we-logo. Lezi zinketho zidinga izinga eliphakeme lamakhono, ngakho-ke uqeqesha okuningi ngangokunokwenzeka futhi usebenzise isofthiwe yezobuchwepheshe uma ungakwazi ukuyikhokhela.
Lena enye indawo ababhalisi abaningi abangena kuyo ngenzuzo. Ngingeke ngihambe ngale ndlela ngaphandle kokuba okungenani unekhamera ye-DSLR onezilonda ezithengiwe ngokwehlukana, futhi wazi ngempela izisekelo eziyisisekelo zokudlala izithombe, njengokungathi ukukhanyaes komath nokubusa. Ungathumela izithombe zakho bese uyithengisa ngezinye zezindlu ezinkulu zesitoko.
Ukusebenzisana kuyindlela förbättrar yokwenza izwi lilalele izilaleli ezinkulu futhi linikeze izinketho eziningi. Amanye imibono yobudlelwane ibandakanya umklami wewebhu osebenza nomdwebi odwebayo, i-blogger yomsebenzi osebenza nomphathi wezokuxhumana, noma umqeqeshi wempilo esebenza nomuntu othengisa izithako zezempilo. Ungase futhi uthenge umkhiqizo wakho ngokusebenzisa amabhulogi amakhulu amakhulu ngokusetha uhlelo lokubambisana olunikeza iphesenti yokuthengisa njengesikhuthazo.